Humaniq စျေး - အွန်လိုင်း HMQ ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Humaniq (HMQ)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Humaniq (HMQ) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Humaniq ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $844 984.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Humaniq တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Humaniq များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
HumaniqHMQ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00531HumaniqHMQ သို့ ယူရိုEUR€0.00449HumaniqHMQ သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00405HumaniqHMQ သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00484HumaniqHMQ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0482HumaniqHMQ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0335HumaniqHMQ သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.117HumaniqHMQ သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0198HumaniqHMQ သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00705HumaniqHMQ သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00738HumaniqHMQ သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.12HumaniqHMQ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0412HumaniqHMQ သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0281HumaniqHMQ သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.398HumaniqHMQ သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.89HumaniqHMQ သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00728HumaniqHMQ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00799HumaniqHMQ သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.165HumaniqHMQ သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0369HumaniqHMQ သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.561HumaniqHMQ သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩6.31HumaniqHMQ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦2.05HumaniqHMQ သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.389HumaniqHMQ သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.147
HumaniqHMQ သို့ BitcoinBTC0.0000005 HumaniqHMQ သို့ EthereumETH0.00001 HumaniqHMQ သို့ LitecoinLTC0.00009 HumaniqHMQ သို့ DigitalCashDASH0.00006 HumaniqHMQ သို့ MoneroXMR0.00006 HumaniqHMQ သို့ NxtNXT0.443 HumaniqHMQ သို့ Ethereum ClassicETC0.000744 HumaniqHMQ သို့ DogecoinDOGE1.52 HumaniqHMQ သို့ ZCashZEC0.00006 HumaniqHMQ သို့ BitsharesBTS0.204 HumaniqHMQ သို့ DigiByteDGB0.202 HumaniqHMQ သို့ RippleXRP0.0178 HumaniqHMQ သို့ BitcoinDarkBTCD0.000187 HumaniqHMQ သို့ PeerCoinPPC0.0186 HumaniqHMQ သို့ CraigsCoinCRAIG2.47 HumaniqHMQ သို့ BitstakeXBS0.232 HumaniqHMQ သို့ PayCoinXPY0.0948 HumaniqHMQ သို့ ProsperCoinPRC0.681 HumaniqHMQ သို့ YbCoinYBC0.000003 HumaniqHMQ သို့ DarkKushDANK1.74 HumaniqHMQ သို့ GiveCoinGIVE11.75 HumaniqHMQ သို့ KoboCoinKOBO1.2 HumaniqHMQ သို့ DarkTokenDT0.00489 HumaniqHMQ သို့ CETUS CoinCETI15.67
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 05 Aug 2020 08:05:01 +0000.